Ity ny OnePlus 5T ary ireto no miavaka farany | Androidsis
Araka ny efa nampahafantarinay anao andro lasa izay, amin'ny 16 Novambra dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny OnePlus 5T, terminal izay tonga eny an-tsena hisolo ny OnePlus 5. Betsaka ny tsaho niely mialoha ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ity terminal ity, toy ny samihafa mpandika teny nahafahanay naka hevitra amin'ny mety ho toy ny ahoana ny terminal?
Androany dia afaka miala amin'ny fisalasalana ihany isika amin'ny farany, satria ny sary amin'ity terminal ity dia voasivana ihany, saingy amin'ity indray mitoraka ity dia tsy namboarina izy ireo, fa sary farany an'ny vokatra, ary araka ny hitantsika, OnePlus dia nanatevin-daharana ny fironana tamin'ity taona ity ny fampihenana ny sisin'ny sisiny hatramin'ny farany ambony.
Saingy tsy ny sary marobe no navoaka an-tsokosoko, fa koa ny famaritana farany an'ilay mitovy dia efa tafaporitsaka, famaritana izay tsipihinay etsy ambany.
OnePlus 5T famaritana
Ny efijery AMOLEd e 6,01-inch miaraka amina vahaolana 2.160 × 1.080 sy ny tahan'ny lafiny 18: 9. Ny efijery dia mampifandray fiarovana Gorilla Glass 5.
Mpikirakira Snapdragon 835 miaraka amin'ny RAM 6/8 GB, satria hanangana maodely roa samy hafa ny orinasa.
Fahafahana fitahirizana 64 sy 128 GB.
Rafitra fiasan'ny OxygenOS miorina amin'ny Android 7.1.1
Fakan-tsary eo anoloana 16 megapixel misy vavahady f / 2.0
Fakan-tsary 2 any aoriana: iray amin'ireo 16 megapixel misy vavahady f / 1.7 ary ilay iray hafa 20 megapixel miaraka amina vava mitovy. Ireo fakantsary roa ireo dia novokarin'ny orinasa Japoney Sony.
Fitaovana fantsom-baravaran-tànana izay ao ambadiky ny fitaovana
Fifandraisana jack headphone
Araka ny hitantsika amin'ny sary, averiko mazava tsara fa ny aingam-panahy dia avy amin'ny iPhone 7 Plus, farafaharatsiny any aoriana, zavatra mety ho novaina mba tsy hiampangana azy ireo hanao kopia mivantana avy amina mpanamboatra hafa, toa ny nanjo an'i Xiaomi miaraka amin'ireo fantsona voalohany navoakany teny an-tsena mandra-pahatongany manaraka ny volavolany. .
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Ity ny OnePlus 5T ary ireto no miavaka farany
Ilay Mpanjaka Emeritus dia hoy izy:
Valiny ho an'i The King Emeritus
Android Oreo 8.1 dia mampihena ny habaka amin'ireo rindranasa izay tsy ampiasainay mba hitehirizana toerana